HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mongol Mooré Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Zandé Zoloa Éwé
Maro ny zavatra nampianarin’i Jesosy ny mpanara-dia azy, tamin’izy tetỳ an-tany, ohatra hoe ahoana no hatao rehefa mivavaka, ahoana no hampifaliana an’Andriamanitra, ary inona no tena mahasambatra. (Matio 6:5-13; Marka 12:17; Lioka 11:28) Ny Fanjakan’Andriamanitra anefa no tena noresahiny, sady tiany ny niresaka momba azy io.—Lioka 6:45.
Hitantsika tao amin’ny lahatsoratra teo aloha fa “nitory sy nanambara ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra” no tena nataon’i Jesosy. (Lioka 8:1) Nahavita nandeha an-tongotra an-jatony kilaometatra nanerana an’i Israely mihitsy aza izy mba hitoriana momba azy io. Hita ao amin’ireo Filazantsara efatra ny zavatra nataony sy nolazainy tamin’izany. Injato mahery no voatonona ao ilay Fanjakana, ary tenin’i Jesosy no ahitana ny ankamaroany. Azo antoka anefa fa vao santionany fotsiny amin’izay nolazainy momba ny Fanjakan’Andriamanitra izany.—Jaona 21:25.
Nahoana no tena zava-dehibe tamin’i Jesosy io Fanjakana io, tamin’izy tetỳ an-tany? Satria izy no nofidin’Andriamanitra ho Mpanjakan’izy io. (Isaia 9:6; Lioka 22:28-30) Tsy ny hahazo fahefana sy voninahitra ary tombontsoa anefa no nifantohan’i Jesosy. (Matio 11:29; Marka 10:17, 18) Zava-dehibe taminy kosa ny Fanjakan’Andriamanitra * satria fantany hoe hisy zavatra hataon’izy io ho an’ilay Rainy any an-danitra sy ny olona tsy mivadika aminy.
INONA NO HATAON’ILAY FANJAKANA HO AN’NY RAIN’I JESOSY?
Tena tia an’ilay Rainy any an-danitra i Jesosy. (Ohabolana 8:30; Jaona 14:31) Mahafinaritra azy ny toetran’ny Rainy, ohatra hoe be fitiavana, mangoraka, ary manao ny rariny. (Deoteronomia 32:4; Isaia 49:15; 1 Jaona 4:8) Tsy tiany mihitsy àry rehefa endrikendrehina ny Rainy. Misy, ohatra, milaza hoe tsy miraharaha an’izay mijaly Andriamanitra, ary tiany hijaly isika. Fantatr’i Jesosy fa lainga izany, ka izany no anisan’ny nahatonga azy hazoto hitory “ny vaovao tsaran’ilay fanjakana.” (Matio 4:23; 6:9, 10) Fantany hoe hataon’io Fanjakana io izay tsy hanaratsiana intsony ny Rainy. Ahoana no hanaovan’izy io an’izany?
Hanova tanteraka ny fiainan’ny olombelona i Jehovah, amin’ny alalan’ilay Fanjakana. ‘Hofafany ny ranomason’izay’ olona tsy mivadika aminy. Hofoanany koa izay zava-drehetra mahatonga izany. Tsy hisy intsony, ohatra, ny ‘fahafatesana, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana.’ (Apokalypsy 21:3, 4) Ny zava-drehetra mampijaly ny olona no hesorin’Andriamanitra. *
Tsy mahagaga raha nazoto nitory momba ilay Fanjakana i Jesosy. Fantany fa hataon’io Fanjakana io izay hahitan’ny olona hoe tena mahery sy mangoraka ny Rainy. (Jakoba 5:11) Tsy izay ihany anefa. Hanao zavatra tsara ho an’izay olona tsy mivadika amin’Andriamanitra koa ilay Fanjakana.
INONA NO HATAON’ILAY FANJAKANA HO AN’NY OLOMBELONA?
Niara-nipetraka tamin’ny Rainy tany an-danitra foana i Jesosy, ela be talohan’ny nankanesany tetỳ an-tany. Nampiasa azy ny Rainy rehefa namorona ny zava-drehetra, anisan’izany ny lanitra mahavariana, ny kintana sy vahindanitra tsy hita isa, ity tany kanto ity, ny olombelona, ary ny zavamananaina hafa. (Kolosianina 1:15, 16) Ny olombelona anefa no ‘tena tian’i’ Jesosy amin’izy rehetra ireo.—Ohabolana 8:31.
Hita tamin’izay nolazainy sy nataony tetỳ an-tany izany. Vao nanomboka nitory izy, dia efa nataony mazava fa “hilaza vaovao tsara” amin’izay mijaly no nahatongavany. (Lioka 4:18) Tsy hoe niteny fotsiny anefa i Jesosy hoe hanampy olona. Imbetsaka izy no nampiseho fa tia olona. Nisy vahoaka be nitangorona hihaino azy, ohatra, indray mandeha. “Nangoraka an’ireo izy, ka nanasitrana an’izay narary.” (Matio 14:14) Nisy lehilahy iray narary be koa nilaza hoe nino izy fa hahavita hanasitrana azy i Jesosy raha te hanao izany. Tena tia an’ilay lehilahy i Jesosy ka nanasitrana azy. Nangoraka azy izy ka niteny hoe: “Sitrako tokoa. Madiova ianao.” (Lioka 5:12, 13) Rehefa maty koa i Lazarosy anadahin’i Maria, dia “nalahelo mafy” i Jesosy nahita an’i Maria nitomany. “Ory dia ory” izy, ka ‘nirotsaka ny ranomasony.’ (Jaona 11:32-36) Tsy nampino ny zavatra nataony avy eo. Natsangany tamin’ny maty i Lazarosy, na dia efa maty efatra andro aza!—Jaona 11:38-44.
Nihelina ihany anefa ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’izany. Fantany hoe mbola harary ihany ny olona nositraniny, ary mbola ho faty ihany izay natsangany tamin’ny maty. Fantany koa anefa fa ny Fanjakan’Andriamanitra no hanafoana tanteraka an’ireo olana ireo. Izany no nahatonga azy hazoto hitory “ny vaovao tsaran’ilay fanjakana”, fa tsy nianina fotsiny tamin’ny hoe nanao fahagagana. (Matio 9:35) Na izany aza, dia noporofoiny tamin’ny fahagagana nataony fa hanao zavatra tsara be maneran-tany ny Fanjakan’Andriamanitra. Hanao izany tsy ho ela io Fanjakana io. Aleo hojerentsika izay lazain’ny Baiboly.
Tsy hisy aretina intsony.
“Amin’izany fotoana izany, dia hampahiratina ny mason’ny jamba, ary hatao mandre ny sofin’ny marenina. Amin’izany fotoana izany koa dia hahavita hianika tendrombohitra toy ny serfa ny malemy tongotra, ary hihoby ny lelan’ny moana.” Ankoatra izany, dia “tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’ ”—Isaia 33:24; 35:5, 6.
Tsy hisy ho faty intsony.
Hitsangana ny maty.
‘Handre ny feony izay rehetra any am-pasana, dia hivoaka.’—Jaona 5:28, 29.
“Hisy fitsanganan’ny” maty.—Asan’ny Apostoly 24:15.
Hanana trano sy asa daholo ny olona.
Tsy hisy ady intsony.
“Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany izy.”—Salamo 46:9.
“Tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, ary tsy hianatra ady intsony.”—Isaia 2:4.
Tsy hisy mosary intsony.
“Hahavokatra tokoa ny tany. Hitahy antsika Andriamanitra, eny, ilay Andriamanitsika.”—Salamo 67:6.
Tsy hisy hahantra intsony.
‘Tsy hohadinoina ny mahantra.’—Salamo 9:18.
“Hovonjeny ny mahantra miantso vonjy, mbamin’ny ory sy izay rehetra tsy manan-kamonjy. Hangoraka ny olona ambany sy ny mahantra izy, ary hamonjy ny ain’ny mahantra.”—Salamo 72:12, 13.
Rehefa mandinika an’ireo soa maro be ireo ianao, hitanao amin’izay ve hoe nahoana no tena zava-dehibe amin’i Jesosy ny Fanjakan’Andriamanitra? Nazoto niresaka azy io tamin’izay te hihaino azy izy. Fantany mantsy fa io Fanjakana io no hanala ny olana rehetra mampahory antsika.
Tianao àry ve ireo fitahiana ampanantenain’ny Baiboly ireo? Inona no tokony hataonao raha te hahazo an’ireo ianao? Ary te hahafantatra bebe kokoa momba an’io Fanjakana io ve ianao? Hamaly izany ny lahatsoratra manaraka.
^ feh. 5 Efa any an-danitra izao i Jesosy, nefa azo antoka fa mbola zava-dehibe aminy foana io Fanjakana io, na hatramin’izao aza.—Lioka 24:51.
^ feh. 8 Manazava ny antony amelan’Andriamanitra ny fijaliana hisy ny toko 11 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.